Bollywood Park & ​​Resorts | အလုပ်များ - အလုပ်ရှာဖွေရေး - ဒူဘိုင်းသို့အလည်အပတ်သွားရန်အမှန်ပင်အံ့သြဖွယ်ရာခရီးသွားပါ
ဘောလီးဝုဒ်ပန်းခြံ & Resorts: ဒူဘိုင်းအတွက်ဘောလီးဝုဒ်ထံအပ်နှံတဲ့ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံသွားရောက်လည်ပတ်
ဒူဘိုင်းအတွက်ဘောလီးဝုဒ်ပန်းခြံ & Resorts, စဉ်းစားပါ အိႏၵိယ သငျတို့သသီချင်းများ, အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပ & တက်ကြွအရောင်ထင်ပါတယ်။ သငျသညျဘောလီးဝုဒ်၏စဉ်းစားသောအခါဒီတော့မဆလာအများကြီးမရှိတယ် ဘောလီးဝုဒ် စိတ်ခံစားမှုဒရာမာစိတ်လှုပ်ရှားတစ်ဦးရောနှောခြင်းမရှိဘဲခုန်ခြင်းနှင့်သီချင်းများကိတ်မုန့်ပေါ်ချယ်ရီပြည့်စုံကြသည်သည်ထိုသူအချို့တို့သည်သင်တို့ကိုသင်တို့ခြေကိုရပ်တန့်မနိုင်နိုင်အောင် peppy များမှာ နှိပ်ခြင်းနှင့် grooving ထံမှ အဆိုပါ rhythms & စည်းချက်ရန်။
ငါသွားနေပြီ အတွေ့အကြုံအကြောင်းကိုပြောပြရန် ငါသည်ဤရက်သတ္တပတ်ဘောလီးဝုဒ်ပန်းခြံများနှင့်အပန်းဖြေစခန်းမှာရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအဖြစ်တဦးတည်းစကားလုံး "Dhamakedar" (စိတ်ကို-မှုတ်, ကြက်သရေ) တွင်တစ်ဦးပျော်စရာ-ဖြည့်နေ့ကဖြစ်ခဲ့သည် သူတို့ဘောလီးဝုဒ်အတွက်ကိုပဌနာ.
သင် Riverland ထဲသို့မဝင်ရယခုအချိန်တွင်, ဟိုမှာအားလုံးငါးဥယျာဉ်နှင့်အပန်းဖြေမှုအတွက်အဓိက entry ကိုကနေမှင်တက်မိပါလိမ့်မည် သငျတို့သယဉ်ကျေးမှုဤအရပ်ဌာန၌အသက်တာကိုမှကြွလာသည်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ပွော့ဂီတတောင်မှနွေရာသီကာလအတွင်းသင့်အားဖြင့် gushing ပူလေတိုက်မခံစားရပါလိမ့်မယ်, သင်သည်ဤအရပ်ဌာနအစားပွင့်လင်းအဲယားကွန်းစနစ်၏အချို့မျိုးရှိပြီးကြောင်းကြည်နူးဖွယ်ရဲ့ခံစားရပါလိမ့်မယ်, အားလုံးတစ်လျှောက်တွင်ရှိပါသည် ...
ဘောလီးဝုဒ်ဥယျာဉ်၏ entry ကိုကူးလာမယ့်, ပထမတစ်ချက်အတွက်မေးရိုး-ကျဆင်းနေအလှတရားရှိတယ်, (ထိုအဘို့အကြှနျုပျ၏ Instagram ကိုထုတ်စစ်ဆေး) ။ သောကြီးမားဒေါင်းဖန်ပန်းချီရှိပါတယ် အိန္ဒိယသင်္ကေတ။ အတွင်းအပြင်နင်း, ရောင်စုံ motif နှင့်အတူတန်ဆာဆင်နှစ်ခုအကြီးအကျယ်ဆင် shaped တိုင်တစ်ဂျမ်ဘိုကဖေး, မယုံနိုင်စရာညာဘက်သို့ဦးဆောင်ရှိပါတယ် ?.
ဤနေရာတွင်ပြီးတာနဲ့သင်ကဆက်စပ်လိမ့်မယ် လူနေမှုအိန္ဒိယလမ်းသငျသညျတိုင်းအခမ်းအနားများအတွက်အရောင်များသည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်သီချင်းများသည်စိတ်ဓါတ်များ & တပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်းများအတွက်ကခုန်ပုံစံများရှိသည်ဘယ်မှာ လမ်းကြောင်းတလျှောက်လုံး.
သငျသညျလည်ပတ်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်ပါလျှင် Infact, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စျေးနှုန်း၏ဤအရပ်ဌာန, ရှိတယျလို့မရှိသင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေ & သွားလာရင်းဝယ်ဖို့ကျေးဇူးပြုပြီး Explore !!! အဆိုပါ Dabang အခြေတည်တန့်ပြတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် စုစုပေါင်း paisa wasoolသငျသညျထိုအရပ်၌တပြင်လုံးကိုရုပ်ရှင်မှတ်မိပါလိမ့်မယ် ... ထဲမှာ Sholay ရေးရာပြဇာတ်ရုံ, သငျသညျကိုသတိပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့ပျော်စရာစီးရှိတယ် သင့်ကျောင်းရက်ပေါင်းဗွီဒီယိုဂိမ်းအကြွေစေ့ကစားရုံ၏။
ငါ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် ၏ပဉ္စလက်အသကျရှငျ ရုပ်ရှင်-အောင်, ငါ့အကြိုက်ဆုံးလည်းတဦးတည်းအကြောင်း, Zindagi na Milegi Dobaraတကယ်တော့ကျွန်မကျွန်မခင်ပွန်းတွန်းသည်လူအပေါင်းတို့ကိုအထူးသက်ရောက်မှု, အသံသက်ရောက်မှုရုပ်ရှင်များတွင်ပြုပုံကိုသိရန်နိုင်အောင်အံ့သြလေ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုကစားအတွေ့အကြုံ 😅။ (ငါ့အပရိုဖိုင်းအတွက်ဗွီဒီယိုတစ်ခုရှိပါသည်) ။ လမျးခရီးတှငျ, သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ် ဗစ်တိုးရီးယားဘူတာ, အရာမွန်ဘိုင်း VT နှင့် Aamchi တူသောအခြေတည်နေတဲ့ဖီးဖြစ်ပါသည် မွမ်ဘိုင်း ဒေသခံရထား KI ။
ထိုအခါမှသာ၏လွမ်းဆွတ်ခံစားချက်နှင့်အတူ rollercoaster Simulator ကိုစီးနင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ Lagaanဤစီးရဲ့အကောင်းဆုံးကိုသင်ကမ်းပါးကနေကျဘယ်မှာ Krishh ... ရှိကြ၏ သငျသညျဆွဲခံရပါတယ်လို့ခံစားရ အဆိုပါဟန်ပြပြုလုပ်ထားသောစီးအတွက်ဆိုင်ကလုန်း & မိုးသည်းထန်စွာလေတိုက်နှုန်းအားဖြင့်ဆင်း။
မှလာမယ့် အသက်ရှင်သောဖျော်ဖြေပွဲ, အများဆုံးအံ့မခန်းတစျခုဖွစျသညျ Dabangg ၏သင်တန်း, ဘောလီးဝုဒ်၏အိပ်မက်မိန်းကလေးများ၏ဆောင်ပုဒ်အပေါ်တစ်ဦးမဟုတ်သောရပ်တန့်ကခုန်နေဖြင့်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ Dhol ဖျော်ဖြေပွဲအမျိုးမျိုးကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများထံမှရှိခဲ့သည် အိန္ဒိယနှင့်ကစိတ်ကိုထူးခြားဆန်းကြယ်ပဲ! ကြောင့်ပျော့ပူသောရာသီဥတုမှ, ထိုသူအပေါင်းတို့မဟုတ်ရင်, ထို Rajmahal အတွင်းပိုင်းပြုမိခဲ့သမျှသောဤအကအခုန်များနှင့်အသံကပြပွဲဟာဘောလီးဝုဒ် Boulevard ဖြစ်ပျက်။
ကျနော်တို့နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်နေ့တာကိုအဆုံးသတ် Iftar အဆိုပါ Mughl-e-azam ကဖီးနှင့်အရပျမှာဘူဖေးသိသိသာသာလှပသောဖြစ်ခဲ့သည်။
အတှေ့အကွုံ:5/ 5
ကုန်ကျစရိတ်: Package ကိုစတင် AED 89 နောက်ပိုင်းတွင်, စီး, AED 10 အဘို့ဖြစ်ကြ၏ ရရှိနိုင်အမျိုးမျိုးသောကမ်းလှမ်းမှုရှိပါတယ် အခြိနျမှနျမှကသူတို့ရဲ့ website သို့ပေါ်မှာ။
ဆန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို:5/ 5
စီး: 4.5 / 5
ဝတ်ဆင် အဆင်ပြေအဝတ် & ဖိနပ်.
နေရောင်ကာကွယ်ဆေး, ဦးထုပ် & နေကာမျက်မှန်ကိုသယ်ဆောင်။
သင်အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ် တန်းစီရှောင်ရှားသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးမှုများ၏အမှု၌ရန်, လက်မှတ်ကိုလည်းတန်ပြန်ရောင်းချနေကြသည်။
ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုလှည့်လည်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်ကိုရဖို့ရန်, အောက်က link ကို၌ငါ့ Instagram ကိုပရိုဖိုင်းကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု။